Gunting manety volo matihanina ambongadiny Hety mpanety sy mpanamboatra loaka | Icool
Gunting manety volo matihanina amin'ny hety misy volo
Modely ： IC-55-2
Size: 5.5 mirefy
● Hatramin'ny famolavolana ka hatramin'ny famokarana, ny fizotry ny hety tsirairay avy amintsika dia efa nozahana mafy imbetsaka mba hahazoana antoka fa avo lenta ireo vokatra. Manana ny fanahin'ny mpanao asa tanana isika, ary mamorona hety volo mahazatra sy maranitra ary maharitra
● Ity hety haircutting matihanina 5.5-inch ity dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony 440c, izay manana hamafin'ny fihenjanana sy fitafiana, ary maharitra ny androm-piainan'ny hety. Ny lelan-tsofina dia mirona amin'ny 25 degre, ary ny lelany roa dia tapaka sy mihidy tsy misy banga. Azo ampiasaina amin'ny volo maina na lena.
● Ny lelan'ny hety dia misy amin'ny fomba roa, ny lelany mahitsy ary ny lelany misy lavaka. Ny lelan feno dia afaka manapaka ny endrika mety indrindra sy haingana. Ny loza dia manana lavaka hampihenana ny lanjan'ny hety, tsy hiteraka enta-mavesatra eo amin'ny hatotan-tànana, ary miaraka amin'izay koa hampihena ny fanoherana ny rivotra, manapaka milamina kokoa ary mitsitsy asa. Ireo fomba roa ireo dia samy manana ny tombony ananany ary afaka misafidy araka izay ilainy ny mpanjifa.
● Ny tahon'ireto mpikapa volo matihanina ireto dia voavolavola ara-dalàna sy tsara bika. Voakilasy ny velaran'ny hety, izay manatsara ny fampiononana sy ny fivezivezena, ary miantoka fa afaka mihetsika am-pilaminana sy malefaka ny hety. Ity clipper volo ity dia natao ho an'ireo matihanina manome lanja ny fahazavana, ny fahaizan'ny olona, ​​ny faharetany ary ny ergonomika.
Hety fanapahana volo miaraka amin'ny lavaka
Teo aloha: Gunting manety volo havia sy havanana
Manaraka: Gunting Barber VG10 vita tanana vita tanana vita amin'ny sary voasokitra
VG10 vy miakanjo volo vita amin'ny volo vy ...
Gunting Barber VG10 vita tanana vita amin'ny tanana vita sokitra ...